Nezvedu - Shijiazhuang Tefeng Trading Co, Ltd.
Mbeu Inogadzirisa Muchina
Shijiazhuang Tefeng Trading Co, Ltd Isu tinonamatira kune rebhizinesi musimboti we "Anodiwa madhiraimi kubva kumhando yepamusoro chigadzirwa uye sevhisi", uye nekudaro isu tinopa rese-process service kubva kugadzira zvigadzirwa, kugadzira, kugadzira, kuisa uye shure-kwekutengesa sevhisi vatengi vane yekutanga-kirasi nzira yepamusoro-giredhi zvigadzirwa. Kambani yedu yakapihwa zita rekuti "Inovimbika uye Yakavimbika Chigadzirwa & Sevhisi Yevashandi" nevazhinji vashandisi. Isu tinoramba tichingokura tichivakira pamusoro peiyo superexcellent manejimendi yeku manejera nekusimudzira kwepamberi yekuziva kuitira kuti tiuye nemashini edu kumisika yemukati uye yekumhiri kwemakungwa. Tinotarisira nemwoyo wose kushandira pamwe kwako mune ramangwana uye gamuchira nemufaro kuuya kwako kuti uvaka yedu yakajairika ramangwana.
Parizvino, kambani ine maviri ebhizinesi zvigadzirwa:
Kutanga, mhodzi yekugadzirisa mhodzi.
Inonyanya kusanganisira: mhepo yekuchenesa yakachena, chaiyo yekukasira kuchenesa, yekuvhuvhuta typifi cgravity ibwe remover, coating muchina, polisher, yekuparadzanisa muchina uye yese seti yembeu yekugadzirisa uye zvekurima byproducts michina yekugadzirisa ine bvunzo nemhando yepamusoro yenyika dzekuongorora. Ivo vane yakagadzika mhando, akakwana anoita uye advanced tekinoroji.
Yechipiri, waya mesh welding muchina.
Vakasarudzika vane 3D pani yekugadzira mutsara, kusimbisa mesh welding muchina, CNC firicha mesh welding zvishandiso, EPS pombi yekugadzira mutsetse, 3D pani yekuchinjisa muchina (bevel yekuisa musanganiswa wemuchina wemuchina), waya yekushambadzira yemayini sise mesh, pasi kudziya mesh welding muchina, michina yekuwachisa, hexagonal mesh kuruka machira, muchina wakawedzera simbi, razor waya muchina, Dhaimani mesh muchina, pneumatic banga welding muchina uye kusimudza & kudhinda muchina.
Isu tinotenda kwakanaka uye nekusevenza moyo hupenyu hwedu. Isu tinogamuchira nemwoyo wese shamwari dzese kusangana nesu! Ramangwana rakanaka riripo. Ngatiitei pamwe!